विमला गुप्ता/वीरग‌ंज, १५ पुस
महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुमध्ये पाठेघर (आङ/बच्चादानी) खस्ने समस्या पनि एक मुख्य समस्या हो । अहिले पनि ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने कतिपय महिलाहरुले यसलाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा नलिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले बच्चा जन्मेपछिको स्वभाविक असरका रुपमा लिने अथवा आफनो परिवारमा भन्न लाज मान्ने गरेको कारण यसबारे न्युन मात्रामा मात्रै छलफल गर्ने गरिएको छ । आङ खस्ने समस्या विकराल रहेपनि सरकारी अस्पतालमा यसको निशुल्क रुपमा उपचार हुन्छ भन्ने कुरा अधिकांश महिलालाई थाहा नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
पाठेघर खस्नु भनेको महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छाडेर योनीबाट बाहिर आउनु वा शरीरभित्रै आफ्नो ठाउँ छाडेर तल खस्नु हो । यो समस्या मुख्यतयाः पहिलो बच्चा जन्माएको महिला तथा धेरै बच्चा जन्माएका महिला जोसुकैलाई हुन सक्छ । महिलाको पाठेघर झर्नुको मुख्य कारण उसको गर्भाशयलाई बाँधेर राख्ने नशाहरु कमजोर भएर त्यससंग जोडिएका अंगहरु विस्तारै तल खस्नाले हुन्छ । पाठेघरको समस्या हुँदा सुरुमा आफुलाई देखिएको लक्षणहरुबारे वीरगंज ब्रह्मचोककी नगिया देवीले भन्नुहुन्छ “उठ्दा समस्या हुन्थ्यो, बसेर काम गर्न समस्या हुन्थ्यो, बाहिर हिडडुल गर्नपनि धेरै समस्या हुन्थ्यो, सुरुमा चेकअप गराउदा डा.ले पाठेघरमा सुजन भएको समस्या बताएका थिए तर मैले ध्यान नदिएको कारण अप्रेशन गराउने अवस्था आयो ।”
सुरु सुरुमा पाठेघरको समस्या देखा पर्दा कतिपय महिलाहरु अपरेशन गराउँदा शरीर कमजोर हुने तथा झनै समस्या निम्तिने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । तर पाठेघरमा समस्या भएका महिलाहरु डराउनुभन्दा अपरेशन गराएर पिडाबाट बच्न सकिने अपरेशन गराएका महिलाहरु बताउँछन् । सुरुमा डर लागेपनि अपरेशन गराएपछि अहिले पहिलेकै जस्तो स्वस्थ्य महशुश भएको अनुभव छ वीरगंज ब्रह्मचोक निवासी नगिया देवीको ।
हाम्रो समाजमा धेरै महिलाले पाठेघर खस्ने समस्यालाई समस्याको रुपमा नलिई यसलाई साधारण शारीरिक समस्याको रुपमा लिने गरेका छन् । महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी समस्याले हाम्रो देशमा विकराल रुप लिएको छ । समयमै ध्यान नदिदा कतिपय महिलाहरुको ज्यान समेत जाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महिलाहरुको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको पाठेघर सम्बन्धी समस्या निर्मुल पार्न नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारी अस्पताल मार्फत निशुल्क शिविर संचालन गर्ने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । महिलाहरुले पाठेघरमा समस्या आउन नदिन के के उपाय अपनाउन सक्छन् सो बारेमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंजकी बरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.लक्ष्मी थापा सगं साझाकर्मी विमला गुप्ताले गरेको संक्षिप्त कुराकानिको सम्पादित अंश ।
१) महिलाहरुमा पाठेघर खस्ने (बच्चादानी) समस्या किन हुने गर्दछ ?
यो समस्या हुने धेरै कारणहरु छन् जस्तैः कम उमेरमा बाल विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले र जन्मान्तर नगरी बर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भनेर बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, सुत्केरी अवस्थामा टुक्रुक्क बसेर लुगा धुने वा गह्रौँ कामहरु गर्नाले, गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार–उचित आहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा धेरै हिड्ने, गह्रौँ भारी उचाल्ने बोक्ने गर्नाले साथै चुरोट खाएर बारम्बार खोकी रहनाले पनि पाठेघर खस्नुका कारण हो । तर कोहि कोहि महिलामा बाल्यअवस्थादेखी नै राम्ररी शारीरिक विकाश नभएको हुनाले पनि पछि गएर बिवाह नगरे पनि वा सन्तान जनन्माए पनि पाठेघरको समस्या हुने गर्दछ ।
२)पाठेघरको समस्या देखेपछि यसलाई समयमै कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ?
समयमै थाहा भयो र यसको असर कम मात्रामा छ भने पेल्भिक फोराइड भन्ने एक्सरसाइज हन्छ त्यो हामिले गराउछौँ । यसले त्यो एरियाको मांसपेशिलाई कशिलो बनाएर त्यसलाई खस्न दिदैन साथै भारी समान नउठाउने, टक्रुक्क (चौकामौका) नबस्ने जस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ तर पाठेघर बाहिर निस्किनै सकेछ भने दुई वटा उपायले यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ । पहिलो हो निस्केको पाठेघरलाई चुडी लगाएर आफ्नो पहिलेकै यथास्थानमा राख्ने । यो चाहि जो महिलालाई फेरि सन्तानको रहर छ, अप्रेशन गराउन शारीरिक रुपले कमजोर छन् उनिहरुको लागि राम्रो हन्छ । तर यो चाहि तीन तीन महिनामा फेर्नु पर्नाले झन्झटिलो हुन्छ र अन्तिम सटिक उपचार अप्रेशन नै हो ।
पाठेघर खस्ने (बच्चादानी) को समस्या कुनै ठुलो समस्या होइन तर यसलाई समयमै उपचार गरिएन भने जटिल समस्याको रुप लिन सक्छ । बच्चा जन्माउदा जहिले पनि स्वास्थ्य संस्था मै गएर जन्माउनु पर्दछ । घरमा बच्चा जन्माउनाले दक्ष जनशक्तिको अभावमा पाठेघरमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ । बच्चा जन्मिएको ५ हप्ता सम्म गह्रुङ्गो काम गर्नु हदैन किनभने बच्चा जन्मिसकेपछि पाठेघरलाई आफ्नो यथास्थानमा बस्न कम्तिमा ५ हप्ताको समय लाग्छ । प्रायःमहिलाहरु लाजले गर्दा यो समस्या आफ्नो परिवारको सदस्य संग दबाएर राख्छन र यसो गर्नाल समयमै निको हुने समस्या पनि ठुलो रोगको रुपमा देखापर्दछ ।